Qoysaska qaab-qoraalka aasaasiga ah | Abuurista khadka tooska ah
Mid ka mid ah fikradaha aasaasiga ah ee ay tahay inaynu had iyo jeer ku xisaabtano qaabeynta qaabka ayaa ah tan qoyska. Sida magaceedaba ka muuqata, qoys font waa koox ka mid ah walxaha la xiriira midba midka kale iyo inay qayb ka yihiin isla go'an. Qoraalka qaabdhismeedka waxaan ku fahmaynaa kala sooc calaamado muujinaya astaamo qaab dhismeed iyo qaab dhismeed qurxan, qaabkan ayaan ku heli karnaa isla markaana ku meelayn karnaa isla nidaamkaas.
Nidaamkani wuxuu ka kooban yahay xubno taxane ah, gaar ahaan waxyaabaha soo socda:
Calaamadaha xarfaha: Kaar weyn, mid weyn oo lahjad ah, kaar weyn, waxyar, xaraf hoose, iyo xuruuf yar.
Calaamadaha aan xarfaha laheen: Nambarada, calaamadaha xarakaynta, iyo calaamadaha kale.
Qoysaskan ka mid ah dhammaan walxaha ama qaybaha lagama maarmaanka u ah in la qoro qoraal nooc kasta ah oo ku qoran luqado iyo qaabab kala duwan ayaa la isugu geeyay. Ma taqaan qoysaska font aasaasiga ah? Halkan waxaan ku soo jeedinayaa soo koobid:
1 LAGA QAADAY
3 FURASHADA YAR
5 FON BOLD
Kani waa nooc cariiri ah oo nooc qoys ah. Beddelka la soo koobay, sawir-qaadaha ayaa wax ka beddelaya saamiga canaasiirta nooc kasta oo gebi ahaanba la raadsado iyo wadashaqeyn gaar ah. Waa inaan maanka ku haynaa in nooca la soo koobay uusan ahayn natiijada yareynta xarfaha, oo lagu waafajinayo xagooda. Uumiga ayaa ah geedi socod u baahan farsamo gaar ah iyo dhadhan muuqaal ah. Warping wuxuu dambi weyn ku noqonayaa qoraalka waana inaan marwalba iska ilaalino.
Noocyada isku dhafan ayaa badanaa loo qaybiyaa saddex nooc. Dhinac waa la isku koobay, dhinaca kalena waa la isku koobay oo aakhirkiina waa la isku soo koobay, in kasta oo runtu tahay in ay jiraan qoysas kooban oo taageera dhammaan noocyadan. Helvetica, tusaale ahaan, waa mid ka mid ah.
Waxay aad ugu egtahay tan caadiga ah laakiin xaaladdan waxyar baa ka sii fidsan dhammaadkeeda iyo qaar ka mid ah hagaajinta indhaha. In kasta oo cabirrada lagu beddelay dhidibka jiifka, haddana had iyo jeer waxaa loo sameeyaa hab saami ah oo lagu ilaaliyo dhumuc isku mid ah khadka. Qoyskan waxaa badanaa loo isticmaalaa cinwaanada iyo qaabdhismeedyada leh xiriir gaar ah oo ka kooban halabuurka.
Waa nooca lagu gartaa adeegsiga xarfaha waaweyn ee waaweyn ee waxyar ka weyn xarafka m ee font-kaas. In kasta oo badanaa loo yaqaan koofiyado yaryar (jamac ahaan) waxaa jira keli keli ah astaamahan. Qaab dhismeedkani ma laha wax hoosaadyo sida geesinimo, qoraal ama kuwa kale, waa isku heer kuwaan lamana qasan karo. Laakiin waa inaad ka taxaddartaa markaad isticmaaleyso beddelaadkan, maxaa yeelay barnaamijyo badan oo kombuyuutarro ah ayaa adeegsada been-abuurka iyo faraqa u dhexeeya labadoodaba waa mid la arki karo (khariidadaha yar-yar ee beenta ah ee noocyada isugeyntu gabi ahaanba iskuma dheeli-tiran tahay tan asalka ah). Isticmaalidda been-abuurka-transversalites-ka meeshii ugu yaraa ee koofiyadaha yar yar ee asalka ahi waxay dheelitirnaan kartaa xarfahayaga waxayna ka dhigeysaa inay lumiso xarrago iyo joogitaan. Kala duwanaanshahan waxaa badanaa laga helaa noocyada xirfad ahaan loo dhammeeyay oo si gaar ah loogu talagalay in loogu isticmaalo qoraalo xad dhaaf ah oo waaweyn.
Luqadda farta lagu qoro Italic waa isku mid italic. Italic waa nooc dhammeystiran oo noocyada jilayaasha ah oo sameeya font wuxuuna leeyahay dhidibka toosan oo dhinaca midig u janjeera xagal laba iyo toban digrii ah wuxuuna la mid yahay natiijada qoraalka gacmeedka. Xaqiiqdii, muuqaalkani waa midka noo oggolaan doona inaan ku kala soocno nooc asal ah oo asal ah oo ka soo jeeda been abuur. Waxa iyaga ku kala geddisan ayaa ah in farta asalka ah ay had iyo jeer yeelan doonaan xaraf yar oo la mid ah kan gacanta lagu qoro waligoodna yeelan doonin qaabka jillaab ee caadiga u ah daabacayaasha.
Waa kala duwanaanta astaamaha xarfaha farta oo aad uga dhumuc weyn qaabka Roomanka ama "caadiga ah", waxaa muhiim ah in la ogaado in kororka dhumucda astaamaha lagu sameeyay oo keliya gaar ahaana xaglaha jiifka, taas oo ah, ku dhufashada noocyada ay u kala baxaan si ballaaran laakiin aan sareyn. Waa wax iska caadi ah inay jiraan wax ka badan hal nooc oo dhumucdiisuna tahay qaabeynta farta, loona qoondeeyey xagga midab madow, geesinimo ama geesinimo dheeraad ah.
Kani waa nooca ka soo horjeedka nooca geesinimada leh, taasi waa, astaamaha u muuqda kuwo ka khafiifsan ama ka fudud khafiifka jiifka ah marka loo eego nooca caadiga ama Roomaanka.
Waxaan ugu yeernaa astaamaha maxkamadaha aasaasiga ah qoys Roman iyo iyadoo aan lagu soo rogin kala duwanaanshaha ay leeyihiin qoysaskii hore. Ereygu wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa qoraalada taalladaha Roman.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Qoysaska qaab qoraalka aasaasiga ah